သိက္ခာပုဒ်ပြင်ဆင်ချက် (၁၀) မျိုး	Posted on August 28, 2009	by mettayate မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီး သာသနာနှစ် (၁၀၀)တွင် ၀ဇ္ဇီတိုင်းသာ ဝေသာလီရဟန်းတို့ ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များကို ပြင်ဆင်ချက် ၁၀ချက်ကို ပြင်ကြလေသည်။ ဤသည်တို့မှာ –
၁) သင်္ဂီလောဏကပ္ပ – သားချို၌ထည့်၍ ဆောင်ထားသောဆားကို နေ့စဉ်ဆွမ်းသားတိုင်း ရောနှောစားနိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ (ရဟန်းတော်များ ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်တို့ကို အကပ်ခံပြီးပါက နောက်နေ့အတွက် သိုမှီးသိမ်းဆည်း၍ မစားရချေ။ တစ်ထပ်စာအတွက်သာ အကပ်ခံစားသောက်ရသည်။ မွမ်းမတည့်မီ လူသာမဏေတို့အား ပေးစွန့်ရ၏။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာသိမ်းဆည်းထား၍ နောက်တစ်ရက် ဆွမ်းနဲ့ရော၍ သုံးဆောင်ပါလျှင် ပါစိတ်အာပတ်သင့်၏။)
၁၀) ဇာတရူပရဇတ – ရဟန်းတော်များသည် ရွှေငွေကို အလှူမခံဟု ပညတ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်၍ ရွှေငွေ အသပြာကို အလှူခံနိုင် ဟု ဆိုကြ၏။ (ဗုဒ္ဓသာသနာ ၂၅၀၀ ခရီး၊ စာမျက်နှာ ၃၆ မှ ၃၉)
ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ အရှင်ဥပနန္ဒကို အကြောင်းပြု၍ ရွှေငွေအလှူခံမှုကို တားမြစ်သော သိက္ခာပုဒ်ကို မြတ်စွာဘုရား ပညတ်တော်မူခဲ့၏။ ဤသို့ စသည်ဖြင့် တရားအမှန်ကို ရှင်းလင်းဟောကြားရာ ဝေသာလီပြည်သူပြည်သားတို့သည် အရှင်မဟာယသမထေရ်ကြီးသာ ရဟန်းစစ် ရဟန်းမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ အရှင်မဟာယသအတွက် ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယကာခံယူကြကုန်၏။
This entry was posted in မြတ်ဗုဒ္ဓ သာသနာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဗုဒ္ဓဘာသာ (၃) မျိုး